Ibhedi entle eyi-2 Indlu esemaphandleni kaVictoria enebhafu enamanzi ashushu - I-Airbnb
Ibhedi entle eyi-2 Indlu esemaphandleni kaVictoria enebhafu enamanzi ashushu
Indlu entle enamagumbi okulala ayi-2 kaVictoria ihleli ecaleni koMlambo iWeaver eCheshire Countryside. Ikwisiqithi sabucala esinezinye iindawo eziyi-3. Ifikelelwe yibhulorho enamavili.
NgoMgqibelo kwiDutton Locks, apho abantu bajonga iindawo ezintle zeDutton Viaduct, iDutton Horse Bridge kunye neDutton Sluices, zonke iintlobo zobunjineli ze-19th Century.
Le yindawo entle, enokuthula, ephithizelayo kwimbali. Intle kakhulu kwizinto ezenziwayo ezifana ne-angling, ukubukela iintaka, ukuhamba ngeenyawo, ukuhamba ngebhayisekile, ukuhamba ngephenyane kunye nokuphumla
Le ndlu ekwisiqithi esinabamelwane abasondeleyo, inikezela ngendawo yokuhlala yabucala ukuya kutsho kwiindwendwe eziyi-4. Kukho Inqugwala Likamalusi elahlukileyo kunye neYurt ekufutshane nendlu, kunye nethuba lokudibanisa zonke izindlu ezintathu kwezi ndawo zimbini (ukwamkela iindwendwe ezifikelela kwi-8 zizonke) - Ukufumaneka xa kufakwe isicelo.
Le yindawo entle ngeyona ndlela, ejikelezwe ngamanzi, indalo nangaphandle. Ukusuka kule ndlu ungajonga imifula emininzi entle, umlambo kunye nezakhiwo zikaloliwe. Ezininzi zazo zikuluhlu Lwembali Lwesizwe eNgilani kwaye zikhethwe njengezakhiwo ezidwelisiweyo II* eziquka iDutton Viaduct eyilwe nguGeorge Stevenson noJohn Locke kwaye yayiyindawo yokuqala yokuhambisa uloliwe ngaphandle kweLondon.
Le ndlu ikwi-Weaver Way, umzila wokuhamba weemayile eziyi-40 ubude. Kukho amanye amathuba amahle okuhambahamba kunye nomjikelezo kule ndawo. Ungaqalisa izikhephe neekhayaki ezikwiimitha eziyi-50 ukusuka endlwini.
Yindawo ebalaseleyo yokubukela iintaka ezibona iintaka ezinqabileyo kuquka iBlack Kite, eneentlobo ezingaphezu kwe-70 zeentaka ezahlukahlukeneyo.
Unokutyelela iWoodland Trust Dutton Park Nature Park kunye nehlathi elimangalisayo laseDelamere. I-Manchester, i-Liverpool kulula ukuyifikelela. Kubantwana, iChester Zoo ikumgama wemizuzu eyi-20 xa uqhuba kwaye iWorld Theme Park ikufutshane. Kubathengi, iCheshire Oaks Designer Outlet kunye neChester City Centre zikumgama omfutshane ngemoto. I-Cheshire izele ziivenkile zokutyela ezibalaseleyo kunye neebhari. Kukho ibhari enkulu i-Leigh Arms ekupheleni kwendlela, kunye nokubukwa kweendwendwe okusemagqabini kunye nokutya okusemlanjeni - sicebisa kakhulu.
Khusela ukufikelela kwikhowudi engundoqo kwipropati, ukuvumela ukuba ukhangele ngexesha elifanelekileyo kuwe. Sinelungu leqela elihlala ngaphakathi kwemizuzu eyi-15 yokuqhuba le nd…